[Video] Toyota Majesty First Look - Drive Myanmar
Drive Myanmar > News > News > Local Updates > [Video] Toyota Majesty First Look
Toyota Aye & Sons သည် ဒီကနေ့ Junction Square Promotion တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော Toyota Road Show တွင် Brand New ကားတစ်စီးဖြစ်သည့် Toyota Majesty ကို မိတ်ဆက်ပြသ ရောင်းချသွားခဲ့သည်။ ၁၀ ယောက်စီးဖြစ်သည့် Toyota Majesty သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဘက်စုံသုံးကားကောင်းတစ်စီးအဖြစ် မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။
Toyota Aye & Sons သညျ ဒီကနေ့ Junction Square Promotion တှငျ ပွုလုပျခဲ့သော Toyota Road Show တှငျ Brand New ကားတဈစီးဖွဈသညျ့ Toyota Majesty ကို မိတျဆကျပွသ ရောငျးခသြှားခဲ့သညျ။ ၁၀ ယောကျစီးဖွဈသညျ့ Toyota Majesty သညျ မွနျမာနိုငျငံတှငျ ဘကျစုံသုံးကားကောငျးတဈစီးအဖွဈ မွငျတှရေ့မညျဖွဈသညျ။
The road show arranged by the official Toyota Dealer Toyota Aye and Sons, showcased the new Toyota Majesty for the first time in Myanmar. Will this luxury 10 seater take Myanmar as its new kingdom?
Tags ayeandsonsToyotatoyota majesty
Inkas သည် အရေးကြီး ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် Armored Bentley Bentayga ကို မိတ်ဆက်
NEXT 21 Sep 2019